Saameynta Warbaahinta ay Leedahay! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Saameynta Warbaahinta ay Leedahay!
Ilhaan Ciise Maxamed — March 2, 2020
Markii aan fiirinno dhallinyaradeenna intooda badan gaar ahaan kuwa u dhaxeeya 15-25 ta sano, waxaa aad uga muuqda dayac dhanka maskaxda ah, dayac dhanka aqoonta ah, dayac dhanka fikirka ah, bulshada maku aragtay calaamado aadan jecleysanayn sida in lagu daato hal eray oo macno lahayn ee uu qof yiri, sida eraygii maal-mahaan socday ee “Waxdhaamo lawaa”
Ma ahan wax qarsoodi ah Saameynta warbaahinta ay ku leedahay Waxyaabaha aad aaminsantahay, maxaa yeelay macluumaadka an ka helno warbaahinta ayaa sameeyo qaabka fikirkeena shakhsiyadeed.
Soomaaliya Warbaahinta ayaa noqotay “warashadda ugu faa’idada badan” ee dadku ay ka sameeyaan lacago badan, sidaa darteed warbaahintu waxa ay iska ilowday doorkii dhabta ahaa ee ahaa “Waxbarista” , u jeedka kaliya ee warbaahinta ayaa noqday in ay dadka marin habaabiyaan. “Khuraafaadka” ayaa noqday qeyb ka mid ah waxyaabaha dadka loogu qosol siiyo, waan arin xanuun badan marka aad ogaato in waxyaabo aad run u heystay aysan aheyn run. Ma is weydiisay su’aashan “Maxaan sidan ugu ogaaladay qalbkieyga in loo badalo” jawaabta oo gaaban waxa ay tahay “Adiga khaladka ma lihid waxa aad dooneysay”Macluumaad”, hase haatee warbaahinta ay gabtay shaqadii aheyd in ay ku siiso “Macluumaadka saxda ah”,
Hala yaabin sababtoo ah bulshada waxaa u badan dhallinyaro aan garaadkooda maalin (isticmaalin), balse u muuqda kuwa daba yaaca hadba meesha looga yeero.
Su’aasha in la’is weydiiyo mudan ayaa ah halkee ayay wax kadhageystaan dhallinyarada da’daas jirta, intee ayay jecelyihiin in ey xogaha kahelaan, yeysa ku daydaan?
Markii aan isku dayno in aan ka jawaabno su’aalahaas waxa aan ogaaneynaa isha koowaad oo ey xogta ka helaan dhallinyarada waa warbaahinta gaar ahaan idaacadaha sababta aan u leeyahayna waa waxa kaliya oo aan lacag ku xirnayn in ladhageysto, sidoo kalane idaacadaha waxa ey gaaraan meelo uusan internetku gaarin!
Sanadkii tagay ayaa waxa aan la kulmay gabar 16 jir ah oo aan xigto ahayn, waxa ey ka timid miiga fog, waxa aan ka wareystay nolosha iyo waxa meesha ka jira, waxa aan weydiiyay in ey Qur’aanka baratay?
Waxay igu tiri “Haa waan aqaannaa illaa 5 Juz”, waxaan kale oon warsaday farta Soomaaliga ah in ey taqaan, sidoo kale, Haa waan aqaan ayay igu tiri, Maasha Allaah xagee ayaad ka baratay ayaan ku iri? Waxa aan bartay markii aan helay taleefan oo asxaabteyda ayaan farriimo isku qori jirnay ayaga ayaana ibareen Ilhaaneey.
Hagaag! Taariiqda Soomaaliya wax maka taqaannaa? Maya waligeyba ma maqlin meel lagu sheegayo,
Waxa ey ii sheegtay in ey taqaanno fannaaniin iyo heesahooda oo ey xafid santahay, oo waxa aan weydiiyay halka ey kabaratay? Waxa eyna iisheegtay in ey iddaacadda ka dhageysan jirtay, sidoo kalena taleefoonku uu keydiye (Memory) u leeyahay oo ey dhageysan jireen markii ey ariga raacaan!!
Saxaafaddu waxa ey saameyn weyn ku leedahay maskaxda jiilka soo koraya, waxa aad dhageysato waa waxa aad aamin sanaaneyso, aragtida lagugu shubo waa ey kaa dhaadhaceysaa balse waa goorma? Waa marka aad adigu tahay faaruq, oo aanad ka fakirin waxa maskaxdaada galaaya?
Saameyntooda waxa ey u badantahay dhanka taban, sababtoo ah kama fakaraan waxa aan maqleyno ama dhagaheenna kusoo dhacaya balse waxa ey ka fakaraan waxa aan xiiseyneyno oo ey nafteennu jeceshahay, naftu waxa ey xiiseysana waxaa ugu badan madadaalada iyo maxaa dhacayda ey noosoo wariyaan.
Waa laga yaabaa in aad xog ka badan inta aan ogahay aad kaheyso, fadlan qor oo la wadaag bulshadaada si loogu baraarugo.
Tags: Saameynta Warbaahinta?
Next post Xiriirka ka Dhaxeeya Diinta, Maslaxadda iyo Siyaasadda
Previous post Maxaad Ka Taqaanaa Maadada Barashadeeda Ay Ka Siman Yihiin Dhammaan Ardayda Daraaseeyso Jaamacaddaha?